Wararkii Ugu Dambeeyay Dagaalkii Maanta Ka Dhacay Magaalada Muqdisho -News and information about Somalia
Home Warkii Wararkii Ugu Dambeeyay Dagaalkii Maanta Ka Dhacay Magaalada Muqdisho
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal Maanta Ciidamo ka tirsan Booliska Degmada Deyniile ee Gobolka Banaadir iyo Maleeshiyaad hubeysan ku dhexmaray Xaafad ka tirsan degmadaas.
Dagaalkan ayaa waxaa la sheegay inuu salka ku haayay muran ku yaalla Xaafada Saban Saban oo ka tirsan Degmada Deyniile,waxaana ka dhashay khasaaro kala soo kala gaaray labada dhinac.
Dad ku sugan Deyniile oo la hadlay Warkii Online ee Magaalada Muqdisho ayaa u sheegay in Ciidanka Booliska iyo Maleeshiyaadka ay isdhaafsadeen rasaas xoogan,wallow markii dambe ay istaagtay.
Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in dagaalkaas dhaawac uu kasoo gaaray Xoghayaha degmada Deyniile ee Gobolka Banaadir Mahad Shilaawe,waxaana dhaawaciis la tilmaamay inuu yahay mid fudud.
Ilaa iyo hada ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka ee Deyniile ee Gobolka Banaadir oo ay uga hadlayaan dagaalkii Maanta ka dhacay Xaafada Saban Saban,kaasi oo salka ku haayay muran ku yaalla halkaas.
Previous articleCiidamada Kenya oo Qarax ku burburiyey xarun Shirkadda Hormuud ku lahayd degmada Baardheere, Gedo
Next articleSAWIRRO: Qoyska Marxuum Eng. Yariisow Oo Lagu Soo Dhaweeyay Xarunta G/Banaadir
Axmed Karaash oo markale magacaabay guddiga gurmadka Gardafuu
Duqa Muqdisho “Ciyaarahan aan soo gabagabeynay waxa ay ka tarjumayaan is –dhexgalka bulshada
Puntland oo u hanjabtay odayaasha dhaqanka ee gobolka Bari.
RW Kheyre lacagta uu bixiyo Xaggee ka keenaa, Miyeyse ku jirtaa...
Somaliland oo siideysay mas’uuliyiin ka xirnaa xisbiga Waddani